Vanhu mukati mavhiripu vanogona kutyaira mota nekuita akasiyana moditions kumota yavo, kana ivo vanotyaira mota dzakanyatsogadzirirwa wiricheya vashandisi. Kune mawoko ekudzora uye akakosha mota dzinovatendera kutyaira kushandisa joystick zvakanyanya.
Kuvimba nerubatsiro kunogona kutyisa kana zvasvika pakutyaira mota nekuti ndizvo zvakakosha. Nekudaro, kune makambani mazhinji anopa aya mota chete wiricheya vanoshandisa. Wiricheya inowanikwa mota dzinoita musiyano wakakura we remara vatyairi. Vanhu vanogona kubatsirwa nemota idzi nekuti vanogona kuzvimiririra zvachose. Idzo mota dzinogona kunge dzakagadziriswa zvakanyanya ne akasiyana maficha senge otomatiki madhoo uye anogona kutyairwa nemushandisi kubva kwavo wiricheya.
kana wiricheya mushandisi haadaro inoda kana kukwanisa izvi mhando of wiricheya kufambidzana mota, pane zvinogara zvichishandurwa zvinogona kugadzirwa kudzora kwetsika dzemotokari. Aya magadzirirwo emota anowanikwa kune akawanda mota uye anenge chero munhu anogona gadzirisa ivo. Panyaya yezvakasiyana mhando yekugadzirisa kugadzirisa, kune ruoko rwekudzora, madhiraivho, pamwe nekuwedzera kwema pedal. Nekuti wiricheya vashandisi, izvi zvinodzora zvinogona kugadzikana chero bedzi pazvinosvika nyore uye kuti zvishande. It yakakosha yekuchengeta izvi zvinhu mupfungwa kana uchitsvaga aya marongero ekugadzirisa pakati pezvimwe.
Kutyaira wiricheya vashandisi vanogona kuita senge kurota, asi ndizvo zvinogoneka. Pane sarudzo dzakasiyana siyana zvichienderana nezvinodiwa nemunhu nemari. Mumwe aigona kutyaira a wiricheya kufambidzana mota yakavakirwa chakakomberedza chigaro pachayo nemadhigirii ekutyaira akagadzwa kwavari nyore kana ivo vanogona kugadzirisa yavo mota kuzvinunura kubva pakutenga chitsva chose motokari.